ဘေဂျင်း (Beijing) ထမင်းကြော် | Wutyee Food House
ဘေဂျင်း (Beijing) ထမင်းကြော်
August 22, 2010 by chowutyee ဘေဂျင်း (Beijing) ထမင်းကြော် (၄ယောက်စာ)
ဒါကတော့ Beijing ထမင်းကြော်လေးပါ။ မနက်စာ စားရန် ထမင်းကြော် အသစ်အဆန်းလေးပါ။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပြီ စားလို့လည်း အရသာကောင်းပါတယ်။ နှမ်းဆီနံ့လေးမွှေးပြီ အရသာက သာမန် ထမင်းကြော်တွေနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားမူလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ချက်နည်းလေးကို တူတူကြည့်ရအောင်…
၁။ ချက်ပြီးသား ထမင်း – ၄၀၀ဂရမ်
၂။ ကြက်ဥ – ၃လုံး ( ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်ပြီ ခလောက်ပေးပါ)
၃။ မြေပဲဆီ ( groundnut oil) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၄။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၂၀ ကျပ်သား (အတုံးသေးများ လှီးပါ)
၅။ ခရမ်းချဉ်သီး (tomato) – ၂လုံး (အစေ့ထုတ်ပြီ ၈စိပ်စိပ်ပါ)
၆။ မုန်လာဥနီ (carrot) – ၁ဥ (အတုံးသေးလေးများ တုံးလိုက်ပါ)
ရ။ ဘိုစားပဲ (French Bean) – ရခု (အတုံးသေးလေးများ တုံးလိုက်ပါ)
၈။ ပဲငံပြာရည် အကြည် (Light soy sauce) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၉။ နှမ်းဆီ (sesame oil) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၀။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁၁။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း ( ပါးပါးလှီးပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ကြက်သားတုံးလေးများကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဖြင့် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးနောက် ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်၍ ကြက်သားတုံးလေးများကို ကျက်သည်အထိ မွှေပေးပါ။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ကြက်သားများကို ပြန်ဖယ်ထားပေးပါ။
၃။ မုန်လာဥနီ နှင့် ဘိုစားပဲများကို ရေနွေး ၂မိနစ်ခန့် ဖျော်ထားပေးပြီ ရေအေးပြန်စိမ်ထားပါ။ နောက်မှ ဇကာဖြင့် ရေပြန်စစ်ထားပါ။
၁။ ထမင်းကြော် စကြော်ပါတော့မည်။ ဒယ်ထဲသို့ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ခလောက်ထားသော ကြက်ဥများကို ထည့်ပြီ ကြေမွအောင် မိနစ်အနည်းငယ် မွှေလိုက်ပါ။
၂။ ထို့နောက် ထမင်းများကို ထည့်ပြီ အသာလေး မွှေပေးပါ။ (ထမင်းများ မကြေမွသွားပါစေနှင့်)
၃။ ပြီးလျှင် မုန်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြော်ထားသော ကြက်သားများကို ထည့်ပြီး ၁မိနစ်ခန့် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ ပြီးမှ ပဲငံပြာရည်(အကြည်)၊ နှမ်းဆီ၊ င၇ုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်မြိတ် အားလုံး ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ပူပူနွေးနွေးလေး Beijing ထမင်းကြော်ကို မနက်စာအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါပြီ….
on August 22, 2010 at 9:41 am | Reply ချော
အင်း ဒါလေးကလည်း မဆိုးဘူး လွယ်လဲလွယ်တယ်
on August 22, 2010 at 1:49 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မချော လုပ်ရတာလွယ်လည်း လွယ်တယ်။ စားလို့လည်းကောင်းတယ်..🙂
on August 24, 2010 at 8:51 am | Reply hmone
tal tal ko sar kaung mae pone lay bae…yummy…..
on August 24, 2010 at 8:53 am | Reply chowutyee
မနက်စာ အဖြစ် လုပ်စားကြည့်လေ မှုံကြီးရဲ့..😉
on August 24, 2010 at 6:12 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်လာပါတယ်။ ယာကူဇာကိုတော့ မကြာမကြာရောက်ပါတယ်။
ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ စိတ်ဝင်စားလို့ နောက်လဲ လာကြည့်ပါဦးမယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ပြောလို့ရတာဟုတ်ဘူး။ ချက်ကျွေးချင် ချက်ကျွေးနေရမှာ။း)))))
on August 25, 2010 at 3:15 am | Reply chowutyee
ကိုကိုမောင်ရေ လာလည်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ…. ဟားဟား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တတ် ထားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်… နောက်လည်း လာလည်ပါနော်…
on August 24, 2010 at 6:14 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
လင့်ခ်ပါ တစ်ခါတည်း ယူသွားလိုက်တယ်နော်။
on October 14, 2010 at 8:49 am | Replyိdclee
ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ စားချင်တယ်..လုပ်နည်းသိရင် ပြောပြပါ…..
on October 14, 2010 at 9:29 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့.. ၀တ်ရည်တော့ သေချာ မသိပေမယ့် မေးပေးပါ့မယ်..🙂
on December 20, 2010 at 10:06 am | Reply moe
email subcription လုပ်ထားတာ တစ်ခါမှလည်း မပို့ပေးဘူး
ညနေစာချက်ခါနီးတိုင်း ဘာချက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး လာ လာ ချောင်းရတယ်
သူများတိုင်းပြည်မှာနေတုန်း ကရိယာတန်စာပလာ အပြည့်အစုံရှိတဲ့ သူများ kitchen က ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကြီးပေါ့ 🙂 😛
on December 21, 2010 at 4:06 am | Reply chowutyee
မမိုးရေ email subcription လုပ်ရင်တော့ အမှန်ဆို ဟင်းသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးရမှာပါ။ တချို့ကတော့ တလတခါမှ ပေါင်းပို့ပေးဖို့ ရွေးထားလို့ တလတစ်ခါမှ အီးမေးကနေ အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။ မမိုး အီးမေးကို ၀တ်ရည် အီးမေး chowutyee(at)googlemail(dot)com ကိုပို့ပေးလိုက်ပါ။ ၀တ်ရည် ပြန်အီးမေး subcription ထပ်စမ်းလုပ်ကြည့်ပေးပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ။😛
on April 15, 2011 at 12:51 pm | Reply pyae sone
on April 17, 2011 at 12:42 pm | Reply pyae sone
i wan try do tonight…..for dinner:Dhaha
on September 24, 2011 at 5:59 am | Reply Xman_နတ်လူမုန်း
Video တွေ ရိုက်ထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်
လိုက်ကြည့်တာ တော် တော် စုံတယ်ဗျာ
Online ပြန်တက်လာမှဘဲ ဖိတ်ခေါ်ပါအုံးမယ်
မြန်မာ အစားအစာတွေ ချက်တတ်ချင်တာဗျာ
ဒါပေမဲ့ မီးအေးအေး လေးနဲ့ မချက်တတ်တော့
မကောင်းဘူး မီးလုံးကြီးကြီး တွေနဲ့မှ ချက်တတ်ပြုတ်တတ်တော့
မမိုက်ဘူး နောက်ဘဲ ထပ်လာလည်အုံးမယ်ဗျာ
on October 1, 2011 at 9:05 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း…🙂
on December 14, 2013 at 7:34 am | Reply khaing tun